Midowga Musharaxiinta oo soo dhaweeyay talaabada uu ku wanaajinayo Rooble xiriirka Imaaraadka Carabta - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Jan 7, 2022
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ku boggaadiyay Ra’iisul Wasaare Rooble dadaalka uu dib ugu soo celinayo xiriirkii istiraatiijiga ahaa ee sanadihii u dambeeyay la xumeeyay ee Soomaaliya kala dhaxeeyay Imaaraadka Carabta.
Qoraal kooban oo midowga Musharaxiinta soo saaray ayaa loogu mahadceliyay deeqda Imaaraadka Carabta.
“Golaha Midowga Murashaxiintu, wuxuu uga mahadcelinayaa dawlada Isu-taga Imaaraadka Carabta deeqda ay maanta soo gaarsiiyey dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu wax-yeelleeyeen.”
Sidoo kale Midowga Musharaxiinta ayaa bogaadiyay dadaalka Ra’iisul Wasaare Rooble ee wanaajinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Imaaraadka.
“Goluhu wuxuu bogaadinayaa dadaalka Raysalwasaare Rooble uu dib ugu soo celinayo xiriirkii istiraatiijiga ahaa ee sanadihii danbe la xumeeyey ee Soomaaliya kala dhexeeyey dawladaha Carbeed ee aan walaalaha nahay oo ay ugu horrayso dawladda Imaaraadka Carabta.”
Ra’iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa dowladda Imaaraadka ka raalli galiyay dhacdadii loogala wareegay lacag bishii April ee 2018 isagoo sheegay in dowlada Soomaaliya ay u hayso lacagtaas ayna dib ugu celineyso Imaaraadka Carabta.
Airline data confirms Russian private security company located in Mali